मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन कहिले होला ? - No 1 News Portal Online News Nepal
Home समाचार मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन कहिले होला ?
मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन कहिले होला ?
काठमाडौँ : पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन पार्टी र सरकारबीच समन्वयसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको प्रस्ताव अगाडि सारेपछि नेकपाभित्र यसमाथि चासो बढेको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन कहिले हुन्छ भन्ने समयसीमा निश्चत भैसकेको छैन । तर, स्थायी कमिटी बैठक सकेर मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालवीच छलफल र गृहकार्य भएको छ । यसैअनुसार १३ देखि अनिश्चत बनेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक भदौ २६ का लागि बोलाइएको छ ।
सोमबार बिहान महासचिव विष्णु पौडेलसहित अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच भएको छलफलले बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो । गत १० असारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक आन्तरिक विवादकै कारण पटक–पटक स्थगित हुँदै अनिश्चित बनेको थियो ।
विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले ६ भदौमा नै प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसैको जगमा दुई अध्यक्षले स्थायी कमिटीका प्रस्ताव तयार गरेर बैठकबाट अनुमोदन गराउने तयारी गरेका छन् । कार्यदलमा बसेर काम गरेका स्थायी कमिटीका एक सदस्यले स्थायी कमिटी बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् पनगर्ठनका लागि औपचारिक बाटो खुला हुने बताए । उनले भने, ‘पार्टी स्थायी कमिटीले नै मन्त्रिपरिषद् पनगर्ठन गर्ने प्रस्तावमा निर्णय लिएपछि दुई अध्यक्षलाई अगाडि बढ्न बाटो खुल्छ । यसका लागि उहाँहरूबीच गृहकार्य भएको छ । भदौ मसान्त आसपास मन्त्रिपरिषद् पनगर्ठन गर्ने उहाँहरुको तयारी हो ।’
स्थायी कमिटी बैठक सकेर मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्दा असन्तुष्टिको स्वर साघुरो हुने ती सदस्यको भनाई छ । भन्छन्, ‘स्थायी कमिटी बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्दा पनि सबैको चित्त त बुझ्दैन । तर, बैठकबाट पास भएपछि संस्थागत असन्तुष्टि आउँदैन । यसमा दुवै अध्यक्ष जानकार हुनुहुन्छ ।’
अहिले अर्थ, सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । ती मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयमा पनि नयाँ मन्त्री पठाउने ओली र दाहालको योजना छ । चाहना भए पनि पार्टीको शक्तिसन्तुलनका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिन सकेनन् । त्यसपछि उनले भदौ १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही समय पुनगर्ठन नहुने बताएका थिए । तर, स्थायी कमिटी बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको तयारी रहेको स्रोतको भनाई छ ।
मापदण्ड बनेको छैन, तर लविङ जारी
कार्यदल प्रतिवेदनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने र स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ छ ।
यसबाहेक प्रतिवेदनमा ‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ प्रस्ताव छ । कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्यि दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ उल्लेख छ ।
कार्यदलका अर्का एक सदस्य भन्छन्, ‘स्थायी कमिटी बैठकपछि दुई अध्यक्षको सल्लाहमा बन्ने ठोस मापदण्डका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको सम्भावना छ ।’ यसैबीच मन्त्रीका आंकाक्षीको लविङ पनि जारी छ ।
अहिले मन्त्रिपरिषदमा रहेका नेताहरु आफ्नो निरन्तरता र अन्य नेताहरु पुनगर्ठित मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रवेशलाई लिएर दौडधूपमा लागेका छन् ।
यसैअनुसार उनीहरुले ओली र दाहालसँग भेटघाट बढाएका छन् । ओली र दाहाल दुवैले पनि आ–आफ्नो अनकूलतामा केही नेतालाई बोलाएर हुनसक्ने मन्त्रिपरिषद हेरफेर र जिम्मेवारीलाई लिएरसमेत छलफल गरेका छन् । kantipur
Previous articleनेपालमा थपिए ९ सय ७९ कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या ४७ हजार २ सय ३६ पुग्यो
Next articleलाेभलाग्दाे गोलभेँडा खेती, माग धान्नै मुस्किल